နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ လုံးဝမပါဝင်ဘဲ အဓမ္မဘက်ကိုအလေးသာနေတယ် ထင်ရတဲ့ Ah boyရဲ့အကြောာင်းအရင်း အပြည့်အစုံ – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် Ah boy ကတော့ တော်လှန်ရေးမှာ လူတွေဒီလောက် ကျဆုံးနေ တာတောင် လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘဲ နေသာသလို နေနေသူပါနော်။ သူဒီလို လုပ်တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖြစ်တဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးမှာ မပါဝင်ခဲ့ဖြင်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ရဲ့ အကြောင်းအရင်း ကိုတော့ ဒီအောက်မှာ အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။ “ဒီတစ်ယောက်က ဘာလို့ Social Punishmentထဲမပါတာလဲ သူလည်းသောက်ကြောတင်းတာဘဲ ဘာနိုင်ငံရေးpostမှမရှိဘဲ မျက်ခွက်ပြောင်နေတယ်🙂
Edited n crd : ပို့စ်ဘယ်တင်မလဲ သူက စခ တွေနဲ့ အမျိုးတော်တယ်လေ🚨စစ်ကောင်စီက ပေးတဲ့ ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချူပ်ကို မဟားဒယားယူထားပြီးCDM ဝန်ထမ်းတွေကို တာဝန်ကရပ်ဆိုင်းစာထုတ်ပါတယ်ဝန်ထမ်း အိမ်ယာကနေနှင်ချဖို့ လုပ်နေပါတယ် 🚨အလိုတော်ရိ မိသားစုဦးကံဇော် မိန်းမနာမည်က ဒေါ်နန္ဒာမွှန်းပါကလေး ၄ယောက်သမီးအကြီးဆုံး : ခိုင်ငွေနှင်းဇော်ဒုတိယသား : ရဲကံဇော် (မိန်းမ မေဖြိုးထွန်း အာဘွိုင်းညီမအရင်း)တတိယသမီး : အေးလဲ့ကံဇော်စတုတ္ထသား : စောကံဇော်မအလ ကလွဲရင် ပါစင်နယ် အတက်ခ် မလုပ်ခဲ့ပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်၊ ရိုက်နှက်၊ ပစ်သတ်နေသူ စစ်သူပုန်ကောင်စီတွေကို ထောက်ခံပီး မိမိသားသမီးများကို နိုင်ငံခြားမှာ ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရတွေ ခံစား စံစား ခိုင်းတာ တရားမျှတသလား တွေးကြည့်နိုင်အောင် ရှယ်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့ကိုမှ personal attack လုပ်ခြင်း မဟုတ် …စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ပူးပေါင်းသူတွေရဲ့ မျိုးဆက်တွေကို ဖော်ထုတ်ခြင်း နဲ့ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အားမပေးခြင်းဟာ မြန်မာပြည်ကို တကယ် ချစ်သူတိုင်း လုပ်ရမယ့် တာဝန်ပါဦးကံဇော် … စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ပါချုပ်ဟောင်း အခု စစ်အာဏာရှင်ပေးတဲ့ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် တာဝန်ယူထားသူသမီး အကြီး … ခိုင်ငွေနှင်းဇော် … Pennsylvania မှာနေ … နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ်ထား … ?? US citizen … Khinez organics skincare products များ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ
Edit အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ နေ့ကနေ ခုထိအပြုံမပျက် ဈေးရောင်းလျက်ပါရှင် ယောကျာ်း၂ယောက်ကြားဗျာ များရင်း မျက်ရည်ချူနေလည်း လောက်ကောင် မျိူးဆက်ပါပဲUS မှာရှိတဲ့ အစ်ကိုအစ်မတို့ SP သေချာလုပ်ပေးကြပါရှင့် 🙏ဒေါက်တာကံဇော်က သိန်းစိန်လက်ထပ်မှာ ဒုသမ္မတဖြစ်ဖို့ရှိတာသူ့သမီးက နိူင်ငံခြားသားကိုယူလို့ မဖြစ်တော့တာ မောင်နှမချင်းချင်းတောင် စကားမပြောဘူးတဲ့
သားအကြီး ရဲကံဇော်က Facebook cele Kyaw Phyo Tun (Ah Boy) ရဲ့ညီမနဲ့ ရထားပါတယ် Ah Boy တို့က တကယ့်ခရိုနီပါ ။ ဦးကံဇော် ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ စီမံကိန်းတွေ တော်တော်ရအောင် မိသားစုချင်းဆက်လိုက်ပါတယ်သားအငယ် စောကံဇော် ကလည်း အာဏာရှင်သားပီပီ ဆိုးလိုက်သောင်းကျန်း လိုက်နဲ့ clubတွေ barတွေစားသောက်ဆိုင် တွေမှာဆို လုပ်ချင်တာလုပ် နေတဲ့လူရမ်းကားပါ အာဏာရှင်အစစ်တွေပါ ခုလည်း ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် တဲ့ ခိုးလို့ကောင်းတဲ့နေရာပါ ” လို့ ရေးထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေ…
နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ လုံးဝမပါဝငျဘဲ အဓမ်မဘကျကိုအလေးသာနတေယျ ထငျရတဲ့ Ah boyရဲ့အကွောာငျးအရငျး အပွညျ့အစုံ
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော Ah boy ကတော့ တျောလှနျရေးမှာ လူတှဒေီလောကျ ကဆြုံးနေ တာတောငျ လုံးဝ ဂရုမစိုကျဘဲ နသောသလို နနေသေူပါနျော။ သူဒီလို လုပျတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ စဈတပျ အသိုငျးအဝိုငျးမှ ဖွဈတဲ့အတှကျ တျောလှနျရေးမှာ မပါဝငျခဲ့ဖွငျး ဖွဈပါတယျနျော။သူ့ရဲ့ အကွောငျးအရငျး ကိုတော့ ဒီအောကျမှာ အပွညျ့အစုံ ဖတျရှုနိုငျပါတယျနျော။ “ဒီတဈယောကျက ဘာလို့ Social Punishmentထဲမပါတာလဲ သူလညျးသောကျကွောတငျးတာဘဲ ဘာနိုငျငံရေးpostမှမရှိဘဲ မကျြခှကျပွောငျနတေယျ🙂
Edited n crd : ပို့ဈဘယျတငျမလဲ သူက စခ တှနေဲ့ အမြိုးတျောတယျလေ🚨စဈကောငျစီက ပေးတဲ့ ပွညျထောငျစုစာရငျး စဈခြူပျကို မဟားဒယားယူထားပွီးCDM ဝနျထမျးတှကေို တာဝနျကရပျဆိုငျးစာထုတျပါတယျဝနျထမျး အိမျယာကနနှေငျခဖြို့ လုပျနပေါတယျ 🚨အလိုတျောရိ မိသားစုဦးကံဇျော မိနျးမနာမညျက ဒျေါနန်ဒာမှနျးပါကလေး ၄ယောကျသမီးအကွီးဆုံး : ခိုငျငှနှေငျးဇျောဒုတိယသား : ရဲကံဇျော (မိနျးမ မဖွေိုးထှနျး အာဘှိုငျးညီမအရငျး)တတိယသမီး : အေးလဲ့ကံဇျောစတုတ်ထသား : စောကံဇျောမအလ ကလှဲရငျ ပါစငျနယျ အတကျချ မလုပျခဲ့ပါ။ ပွညျတှငျးမှာ ပွညျသူတှကေို ဖိနှိပျ၊ ရိုကျနှကျ၊ ပဈသတျနသေူ စဈသူပုနျကောငျစီတှကေို ထောကျခံပီး မိမိသားသမီးမြားကို နိုငျငံခွားမှာ ဒီမိုကရစေီ အနှဈသာရတှေ ခံစား စံစား ခိုငျးတာ တရားမြှတသလား တှေးကွညျ့နိုငျအောငျ ရှယျပါတယျ။
ဘယျသူ့ကိုမှ personal attack လုပျခွငျး မဟုတျ …စဈအာဏာရှငျနဲ့ ပူးပေါငျးသူတှရေဲ့ မြိုးဆကျတှကေို ဖျောထုတျခွငျး နဲ့ သူတို့ရဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးမြားကို အားမပေးခွငျးဟာ မွနျမာပွညျကို တကယျ ခဈြသူတိုငျး လုပျရမယျ့ တာဝနျပါဦးကံဇျော … စီးပှားရေး တက်ကသိုလျ ပါခြုပျဟောငျး အခု စဈအာဏာရှငျပေးတဲ့ ပွညျထောငျစုစာရငျးစဈခြုပျ တာဝနျယူထားသူသမီး အကွီး … ခိုငျငှနှေငျးဇျော … Pennsylvania မှာနေ … နိုငျငံခွားသားနဲ့ လကျထပျထား … ?? US citizen … Khinez organics skincare products မြား ထုတျလုပျရောငျးခြ
Edit အာဏာသိမျးပွီးတဲ့ နကေ့နေ ခုထိအပွုံမပကျြ စြေးရောငျးလကျြပါရှငျ ယောကျြား၂ယောကျကွားဗြာ မြားရငျး မကျြရညျခြူနလေညျး လောကျကောငျ မြိူးဆကျပါပဲUS မှာရှိတဲ့ အဈကိုအဈမတို့ SP သခြောလုပျပေးကွပါရှငျ့ 🙏ဒေါကျတာကံဇျောက သိနျးစိနျလကျထပျမှာ ဒုသမ်မတဖွဈဖို့ရှိတာသူ့သမီးက နိူငျငံခွားသားကိုယူလို့ မဖွဈတော့တာ မောငျနှမခငျြးခငျြးတောငျ စကားမပွောဘူးတဲ့
သားအကွီး ရဲကံဇျောက Facebook cele Kyaw Phyo Tun (Ah Boy) ရဲ့ညီမနဲ့ ရထားပါတယျ Ah Boy တို့က တကယျ့ခရိုနီပါ ။ ဦးကံဇျော ဝနျကွီးဖွဈတဲ့ အခြိနျမှာ စီမံကိနျးတှေ တျောတျောရအောငျ မိသားစုခငျြးဆကျလိုကျပါတယျသားအငယျ စောကံဇျော ကလညျး အာဏာရှငျသားပီပီ ဆိုးလိုကျသောငျးကနျြး လိုကျနဲ့ clubတှေ barတှစေားသောကျဆိုငျ တှမှောဆို လုပျခငျြတာလုပျ နတေဲ့လူရမျးကားပါ အာဏာရှငျအစဈတှပေါ ခုလညျး ပွညျထောငျစု စာရငျးစဈခြုပျ တဲ့ ခိုးလို့ကောငျးတဲ့နရောပါ ” လို့ ရေးထားပါတယျပရိသတျကွီးရေ…